Ezigbo Twitter, Biko Kwụsị nessgbaso Obi .tọ | Martech Zone
Ezigbo Twitter, Biko Kwụsị nessgbaso Ndị Na-esonụ
Thursday, May 7, 2009 Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 23, 2009 Douglas Karr
Kwa ụbọchị, m na-eleba anya n'ihe ndị m na-eso Twitter. Onye ọ bụla na-eso m na-eche ihe ọ bụla. Emere m ihe na-esote m, site na ịnweta otu onye na-eso ụzọ n'otu oge.
Ọ bụghịkwa ọzọ. Ugbu a, ọ bụ mkpari… auto-eso tides a na-egbu ha site na nkeji oge. Enwere m ike ịga na Twitter taa wee chọta narị ndị scammers ga - eme ka ị karịa ndị na - eso ụzọ 10,000 n’ihe gbasara ụbọchị. Twitter ga-agbarịrị n'okpuru oke ibu dị egwu nke nọmba ndị a.
Amaghị m ihe na-amanye mmadụ ịghọ aghụghọ ọnụ iji nweta nku anya na-enweghị isi. Kedu ụdị ego ịchọrọ ka ị gbadaa n'okporo ụzọ ahụ? Amachaghị m mana ọ na-akpasu m iwe. My 5,000 na-eso ụzọ na-eji ihe. Ugbu a m gaferela 6,000… mana ọtụtụ n'ime ndị na - eso ụzọ ọhụrụ bụ olu na - eso olu.
Usoro ndị a na-esochi onwe ha ga-arụ ọrụ na mpụga Twitter, yabụ ọ ga-adị mfe ịchọpụta ma gbochie ha. Twitter kwesịrị ime ya ugbu a - ọ bụghị naanị iji kpochapụ onwe ya nke phony inflated na-eso ọnụ, kama iji belata nsogbu nke ndị na-eso ụzọ a niile ga-eme iji metụta arụmọrụ Twitter maka ndị ọzọ anyị nwere ekele maka ọrụ ha.
Biko Twitter… mee ihe gbasara ya! Ha na-emebi ngwa gị.
Gini Na-eme Nnukwu Onye Nyocha?
10 Business Twitter Apps maka Enterprise
Michael @ TheBlogger Isi Iyi
Mee 8, 2009 na 12: 29 AM
M na-esokarị onwe m mgbe mbụ m malitere wee chọpụta na ụdị ndị m na-akwado abụghị ndị m chọrọ iso. Ugbu a, m bulie ma họrọ otu otu. Ana m eso gị ugbu a ka m nyochara na anaghị adị.
Mee 8, 2009 na 12: 32 AM
M n'ezie tinye arịrịọ na Twitter iwepu m akpaaka-eso ọnọdụ ma m na-anụbeghị azụ… Echere m na ha mara mma ọrụ n'aka ugbu a! Enwere m olile anya na ha gbakwunye otu nhọrọ ka m wee nwee ike gbanyụọ onwe m. Ugbu a, ana m akwa ụta na ọ Michael!
Ana m enyocha nke ọ bụla ma na-emeghe mgbe m hụrụ na ha bụ naanị spammer ma ọ bụ ihe na-esochi akpaaka (ha si na ndị na-eso ụzọ ole na ole ruo ọtụtụ puku n'otu izu).
Mee 8, 2009 na 8: 36 AM
twitter dị na nchịkwa ụwa ugbu a. onye ọ bụla nọ n’ọfịs m na-agagharị naanị oge. emeghị m ihe na-eso ụzọ
Mee 8, 2009 na 9: 07 AM
Lee ihe ọchị na ọkọlọtọ mgbasa ozi n'elu post a bụ maka ọrụ ga-eme ka mmadụ 4,000 bụrụ $ 12.95.
Ọchị? Daalụ Google!
Mee 8, 2009 na 5: 35 PM
Nke ahụ bụ ụda Doug na-eti mkpu na ị nụrụ! Doh!
Mee 8, 2009 na 10: 27 AM
Ọ dị ka oge ọ bụla m gbakwunye post na twitter, m nwere ihe ruru ụmụazụ ọhụrụ ise?
Mee 8, 2009 na 10: 38 AM
Adị m ọhụrụ na twitter mana enwere m ike ịhụ nsogbu na ọgbaghara nke a ga-ebute. Nyere aka nweta nkwado maka mgbasa ozi m iji mee ka ndị mmadụ hụ ìhè ma kwụsị iji akpaaka na-eso robors, scripts na ọrụ.
Mee 8, 2009 na 5: 38 PM
Mee 8, 2009 na 4: 03 PM
Ndụ dị mkpụmkpụ ka gị na ndị mmadụ na-emekọ ihe ọnụ otu ahụ dị mkpụmkpụ… Echere m na kọntaktị kwesịrị ịdị ka karama Mmanya "Ezigbo" ị ga-ahọrọ ma họrọ ihe kachasị mma maka ụtọ gị!
Mee 9, 2009 na 1: 31 AM
OMG. Daalụ maka ide ihe a. Enwere m mmekọrịta ịhụnanya / ịkpọasị na Twitter maka nke a. Naanị ụnyaahụ, m nwere nkwarụ nkwarụ n'ihi na m na-egbusi oge dị ukwuu na-ahazi ndị na-eso ụzọ (efu) kwa ụbọchị (ma enweghị m nso ọnụ ọgụgụ dị elu nke ndị na-eso ụzọ dịka ụfọdụ).
Mee 21, 2009 na 10: 35 PM
M na-eche na nke a bụ mgbanwe maka gị. Echetara m na ị na-ekwu na ị na-agbaso onye ọ bụla soro gị yana na ị nwere mmasị na onye ọ bụla na-eso ụzọ gị. Na-eche ihe kpatara mgbanwe ahụ n'ozuzu gị n'echiche gị banyere usoro a? Ọ bụ naanị ndị spammers ahụ?
Firehose na-elekọta mmadụ
Apr 6, 2011 na 1: 09 AM
Ekwenyere m, echere m na ngwa ọrụ akpaka na-esoghị ezigbo uru ọ bụla maka ndị na-eso ụzọ na followees. Ọ dị mwute ịhụ post a fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 2.